Ugaas Maxamuudd Duulane oo la Sheegay in la Siidaynayo – Rasaasa News
Ugaas Maxamuudd Duulane oo la Sheegay in la Siidaynayo
Jun 23, 2012 Ugaas Maxamuudd Dulane oo la Sheegay in la Siidaynayo
Jijiga, June 23, 2012 [ras] – Ugaas Maxamuud Duulane oo in ka badan mudo lix bilood ah ku jiray jeel aan la ogayn sababta uu u xidhan yahay, oo maalmo ka horna lagu xukumay labo sano oo xadhiga, ayaa la sheegay in dhawaan la siidayn doono.
Ugaas Maxamuud Duulane oo ay da,diisu tahay 87 jira, kana mid ahaa Ugaasyadii gardaadiyey nabad galiyada ka jirta degaanka Somalida, ayaa abaal gud looga dhigay xabsi aan sabab lahayn. Arintaas oo keentay in qurba joogta u dhalatay degaanka Somalidu ay xoog uga gaws qabsadaan xadhiga Ugaaska.
Waxaa la sheegay in xad gudubka Ugaaska loo gaystay dartii uu xumaado xidhiidhka qurba joogta degaanka iyo masuuliyiinta ugu saraysa dawlada degaanka. Waxaana la sheegay in safaarada Maraykanku ay diiday warqada dal ku galka oo ay codsadeen masuuliyiin sare oo dawlada degaanka Somalida ah.
Siidaynta Ugaas Maxamed Duulane ayaa lala xidhiidhinayaa in ay xiligan keentay cadaadis ka dhan ah masuuliyiinta dawlada degaanka Somalida, oo ka yimid dawlada Maraykanka iyo qurbo joogta xooga leh ee u dhalaty degaanka Somalida ee ku nool dalka Maraykanka.
Warar hoose oo aan ka helay magaalada Jijiga, ayaa sheegaya in siidaynta Ugaas Maxamuud Duulane, loo samayn doono xaflad ay abaabushay dawlada degaanka Somalidu oo ay ka qayb galayaan odayaal beesha Ugaaska ah.
Hore ayey ehelada Ugaas Maxamuud Duulane u sheegeen in Ugaasku yahay qorax casar gaadhay, laakiin xadhiga gardarada ah uu noqon doono mid taariikhda u gala masuuliyiinta masuulka ka ah xadhiga Ugaaska.
Si kastaba arintu ha ahaatee siidaynta Ugaas Maxamuud Duulane ayey dadweynaha degaanku soo dhawaynayaan, iyaga oo iswaydiinaya maxaa dambi ah oo uu kolkii hore u xidhnaa?
Qaybtii Tobnaaad Sheekadii Xasan Mataan Axmed Xirsi
Abaar Adag oo ku fool leh Degaanka Somalida
Feb 26, 2020 admin